'बागीले उम्मेद्धारी फिर्ता नलिएपनि सहयोग गर्छन' : डा. यादव - Headline Nepal - Online News Portal from Nepal | Latest Nepal News from politics, sports, entertainment, society, world, technology, opinion, interview, Nepali movies, fashion, life style, tourism, international news, national news, economy, science, music, live news events, live sports events
‘बागीले उम्मेद्धारी फिर्ता नलिएपनि सहयोग गर्छन’ : डा. यादव
Posted by Headline Nepal | २२ कार्तिक २०७४, बुधबार १०:५६ |
-डा.शिवजी यादव,प्रमुख सचेतक (संघिय समाजवादी फोरम)
राजपा र संघिय समाजवादीको गठबन्धन बनेता पनि बागी उम्मेद्धार रहनुको कारण लामो समय पार्टीहरु विच छलफल हुन सकेन । निर्वाचन घोषणा भइसकेपछि जुन किसिमले ठुला दलको ध्रुविकरण भयो त्यसपछि निर्वाचनको क्रममा साना दलहरु थ्रेसहोल्डका कारण ठुलादलहरुसंग मिल्दै जाने क्रम सुरुवात भयो । देशमा बाम गठबन्धन भइसकेपछि त्यसको दवाव स्वरुप अर्को लोकतान्त्रिक गठबन्धनको तयार भयो र त्यसको प्रभाव देशका सवै साना दलमा पर्यो । त्यसो एक किसिमको बाध्यता थियो । तर समयको कारणले मुद्धाको हिसावले राजपा र संघिय समाजवादी एक थियो । र दुईदल विच गठबन्धनको कुरा आएको थियो ।
बागीले उम्मेद्धारी फिर्ता नलिएपनि सहयोग गर्छन
संघिय समाजवादीका धेरै कुरा परिवर्तनकारी शक्तिसंग मिल्ने थियो जस्तो समावेशिता,राज्यको शासन प्रणाली, संघियता इत्यादी । यो कारणले प्राय कुरा बामपन्थी गठबन्धनसंग मिल्ने थियो । यस्तै परिवेशमा राजपाका धेरै धारणाहरु कांग्रेससंग मिल्ने थियो । यो सवै कुरा हुँदाहुँदै पनि समयको अभावले कुन गठबन्धनमा जाने भन्ने निर्णय लिन समयको पनि अभाव भयो ।
त्यसले गर्दा त्यो गठबन्धनले पुर्ण रुपमा आकार लिन सकेन् । यदी तयहाँ सिट मिलेको भए नेता तथा कायएकर्तालाई कहाँ के भनेर मन माझेपछि व्यवस्थापन गर्न सकिने थियो । तथापी केही बागी उम्मेद्धारले आफ्नो उम्मेद्धारी फिर्ता लिनुभएको छ । अझैपनि उहाँहरु त्यस्तो गर्ने पक्षमा हुनुहुन्छ जस्तो लाग्दैन । जनता अहिले एकढिक्का छन । मुद्धा प्रति सर्मपित छन ।
मधेस आन्दोलनको बेला देखि नै जुन किसिमले जनता एकढिक्का भएका छन । ति एक भएका जनता हिमालसम्म आफ्ना मुद्धा लैजाान तयार छन । संविधान संशोधन गरेर मधेसका मुद्धा स्थापित गर्नुपर्छ । उनिहरुका हक अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नुपर्छ । देशलाई एक ढिक्का बनाएर लैजाउ । आफ्नैमा फुट ल्याउनु हुँदैन । यही सोचले संविधानलाई संशधोन गर्दै कार्यान्वयनमा लैजाने बाटोमा जान संघिय समाजवादीको १७ सिट राजपाको १५ सिट बाँडफाट गरिएको हो । चुनावको दिनमा बागीले पनि हामीलाई पुर्णरुपमा सहयोग गर्छन भन्ने मेरो विश्वास रहेको छ ।
सप्तरीमा यसकारण उपेन्द्र यादवको उममेद्धारी
क्षेत्र निर्धारण गर्नेबेला जुन किसिमले निर्वाचन आयोगले निर्णय गर्यो तयो विखण्डन गर्ने खालको थियो । त्यसकारण यादवजीको क्षेत्रमा कटाई यस्तो गर्यो । चतरा देखि बोर्डरसम्म ७० प्रतिशत पहाडी मुलका समुदाय रहेको क्षेत्रमा राखिएपछि यादवजी नै मधेस आन्दोलनको नायक अनि यादव जी कै क्षेत्रमा त्यस्तो ढंङगले क्षेत्र निर्धारण गरिसकेपछि त्यहाँ भोटको संख्या बढी छ भन्ने आँकलन गरेर पनि एक किसिमको हौवा फैलाईयो । त्यो एउटा कुरा रहयो ।
तर सुनसरीका जनताले क्षेत्र निर्धारण जसरी गरेतापनि उनिहरु विश्वस्त छन की अहिले पनि यादव जी यस क्षेत्रमा निर्वाचन लडेको भए भारी मतले जिताउन तयार छन । तर तयसो नभई उपेन्द्र यादव हिमाल,पहाड तराईलाई जोड्न सक्ने नेता भएकै कारण उहाँको उम्मेद्धारी सप्तरीमा हुन पुगेको हो ।
कांग्रेसले सघाउदैछ यादवलाई ?
लामो समयदेखि गठबन्धनको कुरा चल्दै आएका कारण पार्टी भित्र त्यस किसिमको बुझाई भएको हुन सक्छ । समयको अभावले आधिकारिक निर्णय गर्ने अवस्था आएन् तर दुईपार्टीविच त्यस किसिमको समझदारी नहुने भन्ने कुरा हुँदैन होला । तर मुख्य रुपमा के बुझ्न जरुरी छ भने उपेन्द्र यादवले सुनसरी वा अन्य कुनै क्षेत्रबाट चुनावमा उठेको भएपनि जित्ने कुरामा दुईमत छैन । तर कांग्रेसका नेता तथा अहिलेका अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की सुनसरी आएकै कारण उपेन्द्रजी सप्तरी आउनुभएको भन्ने कुरा चाँही होईन ।
Previousनयाँ विश्व लिग फुटबलको तयारीमा फिफा र युइएफए !
Nextनारायणकाजी श्रेष्ठ लडेर घाइते !
‘भूकम्प पछि असिना पानी, बाँच्नलाई खै कहाँ जाने ? पीडितहरुलाई प्रकृतिले चोट दियो गनी गनी…..!’
२७ पुष २०७२, सोमबार १२:३७
‘कम्युनिष्ट गठबन्धन लोकतन्त्र विरोधी छ ‘ : प्रधानमन्त्री देउवा
१ मंसिर २०७४, शुक्रबार १७:३९
धेरै सङ्ख्यामा मतपत्र बदर हुन नदिन निर्वाचन आयोग लचिलो
१ जेष्ठ २०७४, सोमबार ०९:५५
दोस्रो चरणको स्थानीय तहको चुनावमा नेकपा एमाले ५० नगर र ९४ गाउँपालिकामा विजयी
२३ असार २०७४, शुक्रबार ०८:१३